မိဘ​တွေဆီက အနုပညာအ​မွေကို ဆက်ခံထားကြတဲ့ K-Pop Idol (၅) ဦး | News Bar Myanmar
မိဘ​တွေဆီက အနုပညာအ​မွေကို ဆက်ခံထားကြတဲ့ K-Pop Idol (၅) ဦး
K-Pop စတားအများစုဟာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘဝကို လှို့ဝှက်စွာ ထိန်းသိမ်းထား​လေ့ရှိပါတယ်။ ထို့​ကြောင့် သူတို့ရဲ့ ပရိသတ်​​တွေဟာ သူတို့ နှစ်သက်​တဲ့ Idol ​တွေ ဆင်းသက်လာတဲ့ မျိုးရိုးနဲ့ မိသားစုအ​ကြောင်းအရာ​တွေကို သိချင်ကြပါတယ်။ မတူညီတဲ့ မိသားစု​နောက်ခံနဲ့ ​နေရာ​ဒေသ​ပေါင်းစုံက လာကြတဲ့ K-Pop Idol ​တွေဟာ တူညီတဲ့ ​အိပ်မက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်။
ဒီအိပ်မက်ကို ကန့်ကွက်ကြတဲ့ Idol ​တွေရဲ့ မိဘ​တွေရှိသလို တချို့ Idol ​တွေရဲ့ မိဘ​တွေကိုယ်တိုင်က အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းက ဖြစ်​နေတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ ယခု​ဖော်ပြ​ပေးသွားမှာက​တော့ ထိုကဲ့သို့ အနုပညာရှင်မိဘ​တွေက ​မွေးဖွားလာတဲ့ K-Pop Idol ၅ ​ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
1. Chae Won (IZ*ONE အဖွဲ့ဝင်​​ဟောင်း)
Chae Won ဟာ သူမရဲ့အ​မေဖြစ်သူ Lee Ran Hee ဆီက အနုပညာအ​မွေကို လက်ခံရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Lee Ran Hee ဟာ အနုပညာသက်တမ်း အနှစ် ၃၀ ​ကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဝါရင့်ပြဇာတ်မင်းသမီးကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ Chae Won က​တော့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ Produce 48 အစီအစဉ်ကို ဝင်​​​ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပြီး IZ*ONE အဖွဲ့နဲ့ ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပါတယ်။
2. Si Eun (STAYC)
Sieun ဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းက ပရိသတ်​တွေနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တုန်းက နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်​တွေရဲ့သားသမီး​တွေ အ​ကြောင်းကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်တဲ့ Kids are Life’s Blessings ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ခဲ့ဖူးလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Si Eun ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူဟာ ၁၉၈၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က ​တောင်ကိုရီးယားရဲ့ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်လို့ တင်စား​ခေါ်​ဝေါ်ကြတဲ့ ဝါရင့် အဆိုရှင် Park Nam Jung ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာလည်း ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ အနုပ​ညာ​သွေးပါတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
3. Hyun Sik (BTOB)
BTOB အဖွွဲ့ရဲ့ lead vocalist တစ်​ယောက်ဖြစ်တဲ့ Hyun Sik ဟာလည်း ဖခင်ရဲ့ အနုပညာအ​မွေကို ဆက်ခံပြီး မိဘကို ဂုဏ်တက်​စေသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဖခင်က​တော့ နာမည်​ကျော် နယ်လှည့်​တေးသံရှင် Im Ji Hoon ဖြစ်ပါတယ်။ Hyun Sik ဟာ Howon University မှာ အသုံးချဂီတဘာသာရပ်ကို ​လေ့လာသင်ကြားခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ BTOB အဖွဲ့နဲ့ ပွဲဦးထွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံသူ K-Pop Idol တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Sorn က​တော့ ​ငွေဇွန်းကိုက်ပြီး ​မွေးဖွားလာသူဖြစ်ပါတယ်။ Cube Enteetainment နဲ့ စာချုပ်မချုပ်ခင်ထိ သူမဟာ အ​ကောင်းဆုံး နိုင်ငံတကာ​ကျောင်း​တွေကို တက်​စောက်ပြီး ငယ်ဘဝကို ဇိမ်ကျကျနဲ့ ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရသူပါ။ Sorn ရဲ့ ဖခင်ဟာ Wanasthana Sajakul အမည်ရတဲ့ ထိုင်းသရုပ်​ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာ​တော့ နာမည်ကြီး ပါလီမန်အမတ်တစ်​ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
5. Bo Ram (T-ara အဖွဲ့ဝင်​​ဟောင်း)
Bo Ram ရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူက​တော့ K-drama ပရိသတ်​တွေနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ မင်းသမီး Lee Mi-young ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖခင်ဖြစ်သူကလည်း ၁၉၈၀ ခုနှစ်​တွေမှာ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ အဆို​တော် Jeon Young Rok ဖြစ်ပါတယ်။ Bo Ram ဟာ မိသားစုရဲ့ ၃ ဆက်​မြောက် အနုပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆို​တော့ သူမရဲ့ အဘိုးဖြစ်သူ Hwang Hae နဲ့ အဘွားဖြစ်သူ Baek Sul Hee, တို့ကလည်း နာမည်​ကျော် ​တေးသံရှင်​တွေ ဖြစ်လို့ပါပဲ။ သူမရဲ့ ညီမဖြစ်တဲ့ Jeon Woo Ram ကလည်း D-Unit အဖွဲ့ဝင်​​ဟောင်း Idol တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
Source : FlyFm
Next အားလပ်ချိန်ရတိုင်း Thai TV3 မှ ထိပ်တန်းသရုပ်​ဆောင်မင်းသမီး (၇) ဦး လုပ်လေ့ရှိတဲ့ ဝါသနာများ »
Previous « K-drama ချစ်သူ​တွေ မဲ​ပေး​ရွေးချယ်ခဲ့ကြတဲ့ အ​ကောင်းဆုံး ကိုရီးယား နန်းတွင်းဇာတ်လမ်းတွဲ (၅) ခု